Lasan’i Vital ny tokontanin’i Tiko any Toliara – MyDago.com aime Madagascar
Lasan’i Vital ny tokontanin’i Tiko any Toliara	Toy izao indray ny tatitry ny kabary tetsy amin’ny Magro Behoririka :
Ignace : lasa nody ihany i Simao. Raha hanao jerin-todika dia sady mandambolambo ny FAT i Simao no tsy te ho ratsy amin’ny ankolafy telo. Tsy miova ny governemanta, resahana ny fodin’i Ravalomanana tsy misy fepetra fa ny FAT no mijery raha mety. Omaly maraina no tonga ny taratasin’ny Sadc fa tsy irany i Simao ary dia lasa indray ny litanie ary ilay hoe hamono tena lasa nilaza fa tsy hanao izany indray izy raha mody i Ravalomanana fa ho tsaraina. Hoatrany i Simao no nitondra teto, izy no mibaiko fa izao tenenina sy atao.
Mitsimbadika ny rasa ka tsaraina indray ilay afera 7 febroary, misy tahirin-tsary iny ary misy vavolombelona, tsy vitsy ny porofo. Mba hendry ry fitsarana dia teneno fa tsy mahefa io fitsarana io ianareo satria ny tribonaly tsotra tsy afaka mitsara filoham-pirenena.
Ilay inspecteur de douane indray no tratra fa ny tompon’ny bolabola mitsotsotra ary i Christine milaza fa tsy mahalala olona momba io andramena io. Ny trafika bolabola nefa dia halatra ary fandrobana ankitsirano izao, ireny no tokony hanaovana fanadihadiana fa tsy raharaha politika foana no tsaraina vilana.
Edouard : marary mafy ny raiko any Toliara nefa dia efa voky taona izy.
Tany Arivonimamo izahay ary nahatsapa fa mpanjaka kely i Rodin. Teo Napoaka no efa niandry ny vahoaka ary nomena zandary 2 mihitsy hitarin-dalana. Tsy mbola nisy olona natakalon’ny vahoaka any Rodin ary ny mahavariana dia ilay olona naato tamin’ny asany ary natao tsinotsinona no itarainan’ny vahoaka nefa dia misy ny olom-boatendry. Tsy fampanantenana no nomen’i Rodin ny mponina fa asa avy hatrany, nasaina mitady hazo hatao poteau fa izy no hiantoka groupe ho any ilay tanana. Ary nanome vola hamitana ny CEG izay tapaka ny asa fanamboarina. Any ka mbola Dada ny tanana.
Miverina ny fitsarana 7 febroary, efa mba nisokatra ve ilay plainte nalefan’i Ravalomanana momba ny tranga rehefa hatramin’izay? Sa dia 7 febroary tribonaly mitanila foana ? Antsohy koa i Andry fa iza mahalala zavatra betsaka.
Vao i Simao iny lasa iny fa ho betsaka no hanaraka.
Rodin : mahafaly ny mahita vahoaka maro toy izao na dia betsaka aza ny fantsy. Rehefa ny bois de rose avy any Sambava no nampifaliana miaramila? Manao ahoana kosa ny momba ireo tantsaha izay 80%n’ny malagasy izay tsy afaka mamokatra ?
Ny archives misy fa tsy misy atahorana io resaka 7 febroary. Mitoetra ny fitiavan’i Dada any Arivonimamo.
Tsianihy : raha nisy hatrany ny tranga teto amin’ny firenena dia ny nataon’i Rajoelina no lava sy nanimba zavatra indrindra ary tsy mbola tafarina ankehitriny. Tsy azo ekena ny fanongam-panjakana raha amin’ izao taon-jato izao. Ity krizy ity dia tsy hifarana raha tsy manitsaka ny tany malagasy Ravalomanana ary ny faritra dia efa vonona hanao valim-babena ho any i Ravalomanana ka handeha tongotra ho aty mihitsy raha ilaina izany. Manoela : hay mamy ny miaina ry Voninahitsy ! Tsy azo tsaraina amin’ny tribonaly tsotra ny filoham-pirenena ary “enquête indépendante” ihany no mety momba ny raharaha 07 febroary.
Lasan’i Vital ny tokontanin’i Tiko any Toliara, ny mahavariana eto dia rehefa malagasy no manao sy mahavita dia henjehina fa rehefa karana, sinoa na vazaha dia ekena.
Inona ny vaovao ry Vital a ? Manandafy Rakotonirina Tiko – Procès politique ! Auteur Solo Razafy*Publié le 30 juin 201130 juin 2011Catégories Politique	4 pensées sur “Lasan’i Vital ny tokontanin’i Tiko any Toliara”	Saryteny dit :	30 juin 2011 à 6 h 36 min	Vu ces differenttes appropriations des biens de TIKO par TGV & Cie ,on peut se demander qu’est ce qui est plus difficille: la restitution des biens ou la reconciliation nationale avec la retour de Ravalo ? (hena an tana’ tsaka)
ranavalona dit :	1 juillet 2011 à 8 h 31 min	Vorona azon’adala! reniakoho notsipazana kalalao!Mamba reraka!mpitaty ra-kena!
Izany daholo ireo fatin’alika ireo! tsy matahotody!vazaha lany mofo! mpangalatra
mpanompisampy!mpandroba fananan’olona .
LEHILAHY IREO RAHA HO AFA-MAINA @IZAO HATAONY IZAO! raha mbola ao koa ANDRIAMANITRA!
KintanaMananDrambo dit :	1 juillet 2011 à 10 h 45 min	Ry mpitady TANY MORA, Miandry anareo ANTANIMORA !!!!
ranavalona dit :	1 juillet 2011 à 12 h 46 min	Mpitady tany mora hanorena-pangady! Dia tsy menatra « tsy mahazo mody Ravalomanana »
fa maninona raha tsorina fa mbola misy fananany mbola ho ROBAINA !dia mazava ny resaka!
Hanjakao fa nanasatra ny RAY SY RENINAREO ny FANANAN’i dadanay!TSY MANAKAMBO! VAZAHA RERAKA!
Précédent Article précédent : Niakatr’afo tamin’i Dr Simao ny Otrikafo.Suivant Article suivant : Ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara